Rehefa milaza aminao ny mpampiasa tsy hita Instagram ➡️ mpanaraka Instagram ➡️
Jolay 12, 2019 0 fanehoan-kevitra 9406
Inona no zava-misy izay? rehefa milaza amin'ny mpampiasa anao ny tsy nahitana anao? Azo antoka fa tonga taminao ny mombamomba ny namanao Instagram ary miseho aminao ny hafatra manelingelina; Betsaka ny antony mahatonga izany. Hiresaka momba ny antony mety hiseho eto isika ato amin'ity lahatsoratra ity rehefa milaza amin'ny mpampiasa anao ny tsy nahitana anao.
Mipoitra izany hafatra izany rehefa misy olona nanakana anao tsy ho ao amin'ny tambajotra sosialy. koa, rehefa milaza amin'ny mpampiasa anao ny tsy nahitana anao Satria rehefa nosakanana ianao, ny tambajotra sosialy dia manala anao amin'ny fampiasana tombontsoa, ​​amin'ity tranga ity dia jereo na mifanerasera amin'ilay olona nanakana anao.
Rahoviana ny Instagram no miteny aminao ny mpampiasa iray tsy hita ?: Jereo eto!
Ok izao rehefa milaza amin'ny mpampiasa anao ny tsy nahitana anao ianao tsy maintsy ho hita eo ary hahamarina raha tena nanakana anao izy ireo na nitranga ny fanelingelenana hafa. Ny iray amin'ireo fomba mahazatra indrindra hanamarinana dia ny fandehanana amin'ny làlan'ny navigateur amin'ny mode incognito ary ampidino ao amin'ny bara fitadiavana ny URL Instagram amin'ny alàlan'ny fampidirana ny mombamomba ny olona tadiavinao.
Raha toa ka miseho amin'ny fomba mahazatra ny mombamomba anao, tsy tafiditra ao amin'ny kaontinao Instagram izany, midika izany fa nosakanan'izy ireo tokoa ry zareo. Amin'ny lafiny iray, raha tsy mitsahatra maneho aminao ny hafatra mitovy avy amin'ny rehefa milaza amin'ny mpampiasa anao ny tsy nahitana anao Midika izany fa nofafany na naato ilay kaontiny tao amin'ny tambajotra sosialy.
Amin'ny tranga hafa, mitranga ianao fa nanakana mpampiasa iray, ary na dia nanokatra azy aza ilay hafatra "tsy hita" dia mbola miseho foana; Nitranga izany rehefa ela ny fanakanana profil iray dia voasakana tao amin'ny lampihazo Instagram. Raha io no misy dia manazava ny fomba hamahana azy isika.
Dingana hanokatra mpampiasa iray
Mandehana any amin'ny Instagram.
Jereo ny lisitry ny mombamomba ary miditra amin'ny kaontinao.
Avy eo ampidiro ny kisary fanamboarana izay hita ao amin'ny zoro havanana havanana.
Raha aseho ireo safidy dia safidio ny iray milaza "Setting".
Aorian'izay, safidio ny safidy "tsiambaratelo sy fiarovana".
Raha vao vita io dia ampidiro ny fizarana "kaonty voahidy".
Eto ianao dia haseho ny lisitry ny olona rehetra nosakananao tao amin'ny tambajotra sosialy. Safidio ny iray tianao hovohana.
Farany, mila misafidy ny bara izay hiseho amin'ny farany ianao, ary tsindrio ny "sokafana".
Rehefa vita ireo dingana rehetra ireo dia afaka mandehana any amin'ny kaonty mombamomba anao nanidy ary hijery raha tsy miseho intsony ilay hafatra "tsy hita". Raha izany no izy, dia satria nanokatra tamim-pahombiazana ilay mpampiasa ianao ary afaka mifampiresaka indray ry zareo.
Ahoana ny fomba fanokafana mpampiasa iray izay nanidy ahy tao amin'ny Instagram?
Mpampiasa maro ao amin'ny Instagram no manontany tena raha azo atao izany, ary tsy marina. Mbola tsy misy fomba ahafahanao manao io asa io. Raha voasakana anao ny mpampiasa iray dia tsy misy mihemotra, raha tsy manapa-kevitra hamoha anao amin'ny fotoana iray. Raha misy tsy fitovian-kevitrao dia tsara kokoa ny mandinika resaka manokana sy manamboatra ny toe-javatra ivelan'ny tambajotra sosialy.
Ok izao rehefa milaza amin'ny mpampiasa anao ny tsy nahitana anao Misy koa ny mety fa ianao no nanao ilay sakana. Manoro hevitra izahay mba hanaraka ireo dingana voalaza etsy ambony. Amin'izany fomba izany dia afaka mifandray indray amin'ny olona hafa ianao ary ny mifamadika amin'izany.
Hadisoana nanokatra mpampiasa Instagram
Ny iray amin'ireo tranga mahazatra indrindra ao amin'ny Instagram dia ny mahita ireo olona nosakanana satria nanana fahasamihafana manokana izy ireo. Ankehitriny, rehefa raikitra ny toe-javatra dia manatona ny mombamomba ny mpampiasa izy ireo hamaha azy ireo, saingy mahita olana izy ireo amin'ny endrika hafatra. Rehefa miteny amin'ny mpampiasa anao ny tsy nahitana anao ao amin'ny mombamomba an'ity olona ity, mety tsy mila mampiasa fomba hafa ianao hamaha azy; Mankanesa amin'ireo dingana voasoritra etsy ambony.
Antony iray hafa, rehefa milaza amin'ny mpampiasa anao ny tsy nahitana anao dia ilay olona hafa koa nanakana anao. Amin'ity tranga ity, rehefa voasakana ireo profil roa ireo, dia tsy hahita ny hetsika ataon'ny hafa. Mety manontany tena ianao hoe, ahoana no mety nahatonga ny mpampiasa iray hafa nanakana ahy amin'ny fotoana mitovy amiko? Ny marina dia sarotra, saingy tsy hay tsy ho vita.
Na izany aza, noho ny fandrosoana tsy tapaka sy ny fanavaozana ny Instagram dia hetsika azo tanterahina. Izany dia noho ny fanitarana tsy tambo isaina sy ny fampiharana finday izay mamela anao hanakana ny olona nanakana anao voalohany. Izany no antony, imbetsaka rehefa milaza amin'ny mpampiasa anao ny tsy nahitana anao ary efa nosokafanao ilay mpampiasa, dia satria nosakanany ianao.
Na izany aza, mety hitranga ihany koa izany noho ny lesoka fampiharana; Maharitra ora vitsivitsy izany. Raha maharitra io dia manoro hevitra ny hanaisotra sy hamerina indray ny fampiharana ianao, ity no havaozina.
Rahoviana ny Instagram no miteny aminao ny mpampiasa iray tsy hita ?: Manakana ny fifampiraharahana
Araka ny efa nolazaina teo aloha. rehefa milaza amin'ny mpampiasa anao ny tsy nahitana anao, na rehefa nosakananao ny olona iray dia nanjavona tao anaty lisitry ny nosakananao izy, azo inoana fa nafa ilay kaontiny ilay olona, ​​nanafoana azy na nanakana anao noho ny fangatahana na fanitarana izay voalazantsika etsy ambony.
Raha te hanamarina izany ianao dia afaka mahita namana iray izay manaraka an'io olona io ihany ary hikarakara anao hojerena raha nanafa ny kaontiny izy. Safidy hafa dia ny fandehanao amin'ny làlan'ny navigateur sy ny modely fikarohana incognito ho an'ny mombamomba an'io olona io nefa tsy niditra ny kaontinao Instagram anao.
Ny mety iray hafa dia ny fisaorana ny fampiharana sy ny fanitarana izay voalazanay teo aloha, ny mpampiasa dia nahatsapa fa nosakananao izy, ary noho izany dia nanakona anao ihany koa. Tsy zavatra tokony hitranga izany, fa ny tontolon'ny tambajotra sosialy dia feno hadalana foana.
Safidy azo atao
Raha tsy nanidy olona ianao ary nahatsapa fa nanakana anao ilay olona dia misy vahaolana mety hahasoa amin'ity toe-javatra ity. Manaraka, hiresaka kely momba izany izahay.
Ny iray amin'ireo voalohany azonao ampiharana dia ny fijerena sary iray izay nanoratana ilay olona ary miezaka ny hiditra ilay mombamomba azy. Tany am-piandohana, mety hanome hafatra ho an'ny mpampiasa "tsy hita" ny Instagram, aza kivy. Manohiza hatrany mandra-pahitanao ireo teboka telo izay mampiseho ny fisehoana eo amin'ny zoro havanana amin'ny mombamomba. Vantany vao nipoitra izany dia misafidy azy ianao, mitady ny safidin'ny "sokafana", ary ny voila! Ho afaka hahita ny zavatra vita an-tsoratry ny olona iray indray ianao.
Raha toa ka tsy mandeha ho anao ity dia misy vahaolana hafa ihany koa. Manandrama miditra amin'ny solosaina, ho amin'izany dia tsy maintsy misintona ny rindran-tsary ao amin'ny Microsoft Store ianao. Vantany vao vita izany, araho ny dingana rehetra voalaza etsy ambony hahitana ny mombamomba azy ary sokafy ilay izy.
Voasakana ny kaonty Instagram manokana: Inona no tokony hatao?
Raha tonga eto ianao dia satria mety efa niharan'izany tamin'ny Instagram sy ny fanakatonana ny kaonty ianao, tsy misy antony mazava. Izany no antony mahatonga an'ity lahatsoratra ity, hiresaka momba ireo vahaolana lehibe izay azonao ampiharina ianao hamaha ny fidirana amin'ny kaonty Instagram anao ary hahafahantsika mampiasa azy io amin'ny fomba mahazatra.
Zava-dehibe ny fiheverana fa ireo vahaolana ireo dia mihatra amin'ny kaonty izay naato na kilema ny Instagram. Raha, amin'ny lafiny iray kosa, nanaisotra ny kaontinao ny Instagram, dia tsy azo ampiharina ireo torohevitra ireo. Raha izany no zava-misy eto aminao, manoro hevitra izahay hamorona kaonty Instagram vaovao.
Ny fomba tsotra indrindra hahafantarana raha nanakana na tsy nanakona ny kaontinao ny Instagram, dia rehefa miditra ao ianao dia miseho ity hafatra manaraka ity: "Voaroaka ny kaontinao." Midika izany fa mbola mavitrika ny kaontinao, nefa tsy afaka miditra amin'izany ianao. Raha ny tokony ho izy dia mitranga izany rehefa nandika ny politika na ny fepetra fampiasana ny sehatra ianao.
Mba hanamarina raha toa ka tsy mihidy ny kaontinao, dia manoro hevitra izahay fa hiditra amin'ny telefaona hafa ianao. Raha afaka miditra amin'ny mombamomba anao ianao, dia vaovao tsara izany, satria tsy voafafa izany. Amin'ity tranga ity, nanakana ny fidirana amin'ny kaontinao amin'ny Instagram izay namoronanao azy ny Instagram.
Mety hahaliana anao izany: Ahoana no hahalalanao raha voasakana tao amin'ny Instagram ianao?
Rehefa miresaka amin'ny mpampiasa iray tsy hita ny Instagram: Averina ny fidirana amin'ny kaontinao!
Raha ny mahazatra, rehefa manakana kaonty ny Instagram, ny ataon'ny sehatra dia manakana ny ID-nao na ny kaonty Google anao manokana. Raha mampiasa telefaona Android ianao, ny tokony hataonao dia ny mamorona kaonty Google vaovao. Avy eo, holazainay ny dingana tokony harahinao:
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia manaisotra ny fampiharana Instagram.
Rehefa vita izany dia manaova adiresy amin'ny telefaona finday.
Avereno atody any amin'ny fanjakana tany am-boalohany ny telefaona. Hamarino tsara fa manana serivisinao feno ianao amin'ny data, satria ho voafafa ho azy ireo avy eo.
Mamorona kaonty Google vaovao.
Ampifandraiso amin'ny telefaona ny kaonty vaovao.
Farany, misintona ary hametraka indray ny fampiharana Instagram.
1 Rahoviana ny Instagram no miteny aminao ny mpampiasa iray tsy hita ?: Jereo eto!
1.1 Dingana hanokatra mpampiasa iray
2 Ahoana ny fomba fanokafana mpampiasa iray izay nanidy ahy tao amin'ny Instagram?
2.1 Hadisoana nanokatra mpampiasa Instagram
3 Rahoviana ny Instagram no miteny aminao ny mpampiasa iray tsy hita ?: Manakana ny fifampiraharahana
3.1 Safidy azo atao
4 Voasakana ny kaonty Instagram manokana: Inona no tokony hatao?
4.1 Rehefa miresaka amin'ny mpampiasa iray tsy hita ny Instagram: Averina ny fidirana amin'ny kaontinao!
Rehefa nanidy kaonty ny Instagram